चर्चित गायक राजेश पायल राईले ५० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विबाह नगरेपछि उनकी १ सय वर्ष काटेकी हजुरआमाले रुँदै भनिन् – Gazabkonews
चर्चित गायक राजेश पायल राईले ५० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विबाह नगरेपछि उनकी १ सय वर्ष काटेकी हजुरआमाले रुँदै भनिन्
काठमाण्डौ । गायक राजेश पायल राईले आफ्नो मामा मावलीलाई सम्झंदै मावलीघर पुगेका छन् । झण्डै ३० वर्ष उनी मावलीघर गएका हुन् । राजेशले त्याहाँ आफ्ना सबै बालापनलाई स्मरण गरेका छन् । उनले बालापनमा मामाघरमा दशैंको टिका लगाएपछि आफ्ना भाईहरु र आफुले कतिकति पैसा पायौं भनेर घरदेखि पर बारीको छोउमा बसेर पैसा गनेको पनि सम्झिए । मामाघरको आँगनमा उभिएर गायक राजेशले आफ्नो बालापनको धेरै कुरा सम्झिए ।
उनले त्याहाँ कतिपयि बालापनमा गरेका कुराहरु बिर्सिए पनि तर उनका मामाहरु र मावलीका दाईहरुले उनलाई ती कुराहरु स्मरण गराए । एकजना मामाले त राजेशले सानैमा मामाघरको छानोमा उभिएर गीत गाएको र त्यसपछि आफुले आफ्नो नाम ‘रापा राई’ राख्ने भनेर आफुलाई सुनाएपछि राजेशलाई नामको सर्टफम राख्नुभन्दा फुुलर्फम नै राख्नु भनेर आफुले सुझाव दिएको कुरापनि स्मरण गराए । मामाले भनेको उक्त कुरा सुनेर राजेश एकछिन् त घोरिएर सोंच्न थाले र पछि हो है मामा भन्दै मुसुक्क हाँसे ।
भान्जाले आफुले भनेको कुरा मानेर राजेश पायल राई नै नाम राखेको र उक्त नामबाट नै अहिले राजेशको पहिचान बनकोमा भान्जाले आफ्नो कुराको मान राखेकोभन्दै मामापनि नै खुशी भए । उता राजेशलाई उनकी माईजुले बिहे गर्नकोलागी दबाब दिईन् ।
माईजुको कुरा सुनेर अनि बिहेकोलागी दबाब दिएको देखेर राजेश पायल छक्क परे । उमेरले १०० पुगेकी माईजुले बिहेकोलागी दबाब दिंदा राजेशले चुप लागेर हस् भन्नु बाहेक अरु उनीसंग कुनै उपायपनि थिएन । जेहोस् उमेर खाएर बसेका राजेशलाई उनका मावलीले पुग्नेगरी आर्शिबाद दिएका छन् । के राजेशको अब बिहे हुन्छ होला त ? के राजेशले जुम्ल्याहा सन्तान नै जन्माउँछन् होला त ? यो प्रश्नको जवाफ तब उनका दर्शकहरुले पाउँनेछन् जब राजेशले बिहे गर्नेछन् । बाँकी कुरा भिडियोमा छ ।